Sweden oo diidma siisay magangelyodoonka ugu da’da weyn caalamka – fogaanarag
Sweden oo diidma siisay magangelyodoonka ugu da’da weyn caalamka
Bibikhal Uzbeki oo ah haweeney 106 jir ah oo u dhalatay dalka Afganistan loona diiwaan galiyay in ay tahay magangelyodoonka ugu da’da weyn caalamka ayaa la dhacday cudurka stroke ga maskaxda kadib markii dowladda Sweden ay diiday codsigeedii magangelyodoonka, sida uu sheegay wariye swedish ah oo booqday jimcihii.
“Waxay saaran tahay sariir mana awoodo in ay la hadasho ama wax xiriir ah la sameyso caruurteeda iyo kuwa ay ayeeyada u tahay” sidaasi waxaa yiri Nils Resare, oo ah tafatire ka tirsan Blankspot.
Nils Resare oo sii wata hadalkiisa ayaa Radio Sweden u sheegay in haweeneydan loo aqoonsaday qoxootiga ugu da’da weyn adduunka 2015 oo aheyd markii ugu horeysay ee qoxooti ahaan isaga dhiibtay dalka Croatia, halkaas oo ay kula hadashay warbaahinta caalamka iyadoo u sheegtay halka ay ka imaadeen iyo sida ay aheyd xaaladooda.
Hadase ma awoodo in ay hadasho gabi ahaanba ayuu yiri wixii ka dambeeyay bishii june ee sanadkaan oo aheyd markii ay ogaatay go’aankii lagu diiday codsigeeda iyo codsiga qoyskeeda oo ay wada socdeen.
Qoyskaan ayaa hada wajahaya in dib loogu celiyo magaaladoodii Kunduz ee waqooyiga Afghanistaan oo ah halka ay ka soo haajireen.
Markii ugu dambeysay ee ay la hadashay warbaahinta oo aheyd march 2016 ayay sheegtay in ay aad ugu faraxsaneyd in caruurteeda iyo kuwa ay sii dhaleenba ay joogaan Sweden iyagoo nabad qaba, waana waxa iigu muhiimsan noloshayda ayay tiri.
Waxaana hadalkaas laga garan karaa in ay aad ugu naxday diidmada codsiga caruurteeda oo ah waxa ku kariyay dhiiga oo illaa hada ay la saaran tahay sariirta xili qoys ahaan ay ku guuldareysteen racfaan ay ka qaateen go’aankaas, iyagoo raja ka qabo in maxkamadda magangelyodoonka Sweden ay dib u eegto kiiskooda.